Umhla My Pet » umphezulu 4 Tips Ufanele Ukwazi Dating
ukubuyekezwa: Sep. 16 2020 | 3 min ukufunda
Thina zizele ngamacebo ukuthandana naphi na sijonga. Kweli hlabathi lizaliswe abantu bezama ukufumana enye bebona ukuba wonke umntu ofuna ukuba izimvo zabo. Kwaye ke rhoqo benza ngayo kulula xa ngokwenyani konke konke akukho lula. Ukuba ke thina ndina onke wadibana indoda okanye umfazi amaphupha ethu emva zonke. Ngoko ke ndiza kuthetha izinto ezifana “Kufuneka nje ukufumana phezu nantoni na ndakunqanda ukuba uhambe ngayo.” kuba ukuba benze konke oko akuyomfuneko siza ukufunda ingcebiso abathandanayo. Ngoko ke musa ibango ukuba ube yincutshe. Ndiya kwenza ibango ukuba abe nako ukuqonda. Thina sonke kweli kunye.
Le yeyona nto ibalulekileyo ukuze ukhumbule xa ungena umdlalo ukuthandana. Kodwa kwakhona mhlawumbi ke kunzima ukwenza umsebenzi. Kwaye ndiyacinga ukuba ndikhe phantse lonke linetyala yokwenza indlela esicinga umntu siyakuthanda ufuna ukuze kuchukunyiswa. Kodwa nina ngokulula endingazi ufumane uthando lokwenene ngaloo ndlela. Uthando lokwenene unxibelelwano. Kubhaliwe kubona ubani kuni kakuhle ukuba ungubani na yaye mehlo kuwe kuba. Emva kokuba bonke uza kungena ebomini bakho lonke acting? Kodwa oku kuza uxanduva. Naye kufuneka ebahloniphile bangobani. Ngoko umzekelo ukuze nibe yesitshixo nzima kodwa Ndiyayithanda cheesiest ye cheesiest kwi pop. Kufuneka ahlonele kubo ungathanda ukuba ukuhlonipha ukuba. Musa ukuzama ukutshintsha omnye. Mna ndive zabantu ubudlelwane bexesha elide. Yeyona nto mandundu onokuyenza. Oku kukhokelela kuphela ingqumbo nobukrakra.
Izinto Little Gqitha
Kuya kufuneka ukuba kunigweba ukudlala ngayo oku ngubani umntu kuba abanye ngokuqinisekileyo angenjenjalo intshukumo mkhulu kwaye ukuba ezazisidla kwaye besitya! Kodwa le yenziwayo eqhelekileyo kukuba wonke ifana xa abaninzi bakhetha nje itekisi becela ukuba iyeza imini yabo. Ndikhe ndeva abantu besithi phambi kwaye ndithanda ukuba uyavumelana nayo. Into ebaluleke kakhulu ukuba bawafumane isipho kukuba ufuna ukwazi oko ufuna. Libonisa umdla kwabo, bona. Izipho ezichaphazela bonke, ezifana neentyantyambo, iiswiti aftershave / iziqholo ezihle ekuqaleni kodwa ulwalamano inkqubela ungayitshintsha izipho zenu ukuba ngamnye isuntswana ngakumbi umntu othandana.
Ewe, lo umntu kunzima ukuba nobuntu oneentloni. Ukuba phantsi umphandle uneentloni akukho ubutyebi izimvo ampompozayo (Yiyo loo nto abaninzi kuthi babe ngababhali!) kodwa akusoloko kulula ukuba ukuzithemba ukuvakalisa kubo yaye abema endleleni kuni lokufumana uthando ngelishwa kuba umntu ukuze akwazi. Nantso ke isigqibo indlela ongathanda ukuba okanye hayi ngokulandela ndiqala. Ngokucacileyo ungathanda ebomini, uthando ke inye kwaye kuya kufuneka ukuba basebenzise ingqiqo kunye icebiso abanye bazi ukuba iimeko kufuneka ukuvakalisa izimvo zakho kwaye xa kuhle cwaka kodwa xa unako ke uyazi ukuba ungubani. Ungakwazi kuba neentloni. Oku kunokuba nomtsalane. Kodwa kuzama ukuba evulekileyo kakhulu. Kunye neendlela ukunceda ukuba abe ukwenza izifundo kunxibelelwano (okanye ezimbalwa!), ukwenza izifundo ngorhatya, ukuya toastmasters okanye wena nje apho phandle e bume yentlalo kangangoko unako. Yinto kuyoyikisa kodwa yayifanele. Njengoko umama wam wathi, ukuba akufuneki uyeke ubomi bakho nabanye abantu.
Chola Lo Mntu Ngokuba wena
Into eqhelekileyo kakhulu ukuba abantu benze kukuba kuphuthuma umntu ngokusekelwe intsapho okanye abahlobo bacinga. Xa zonke ingcebiso Lumkani apho icebiso omhle ezifana ngokungathi s / yena likhoboka leziyobisi abantu mhlawumbi ukhangela kuphela kuwe. Kodwa abantu banotyekelo kokubeka uhlobo zabo njengohlobo wonke kunye nohlobo lomntu siya kuba elikhethekileyo kuthi. Ukuba ukhangela Hippy okanye beatnik akusoze wonwabe kunye nomfama lizwe kunye vice versa. Kuyavunywa ukuba kukho ezingenjalo kuba ihlabathi ukuthandana ke akucingeleki, kodwa ngokwemiqathango ngokubanzi sonke ukhangela umntu obufanela nathi sifanele ukuba sibe nomntu thina bakholisekile ngubani yaye ngoobani Iyandonwabisa kuthi. Akukho nto kubekho umntu olungileyo ngenxa yokuba abo ubathandayo’ itywina imvume. Ke asinini abo uthandana nabo. Ungu. Kwaye akazange ukubaxelela ukuba benze ntoni ke musa ukuvumela ukuba benze izigqibo ngokuba. Sinenkoloseko izigqibo zakho nengqondo yakho. ikwasithi zakho eluthandweni kudla abo ekunene.
Izihloko Dating Incoko online 100% impumelelo